Hammarby oo xiriirkii u jartay Aregawi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abeba Aregawi 2014. Sawirle: TT
Hammarby oo xiriirkii u jartay Aregawi
La daabacay onsdag 2 mars 2016 kl 12.02
Hammarby IF, ahaydna kooxdii ay ka tirsanayd orad-yahannaddii looga shakisanaa inay isticmaashay maaddo ka mamnuuc ah ciyaartooyda Abeba Aregawi ayaa lagaga dhawaaqay in laga saaray liiska kooxdaasi iyo wada-shaqeeyntii ey la lahaayeen.
Ururka Hammarby IF ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeeysay maadaama uu ururku leeyahay siyaasadda ah in aannu marnaba u dul-qaadan ciyaartooyda isticmaasha maadooyinka ciyaaraha ka mamnuuca ah, sida lagu qeexay bogga ururka Hammarby IF.
Tallaabadan ayaa sidoo kale lagu sheegay in xitaa haddii tuhunka ciyaatooyaddaasi laga qabo uu beenoobo aannu ururku dib uga noqon doonin go’aankiisa. Middaasina lagu saleeyay dacwadaha ku socda Abeba Aregawi ee la xiriira is-daba-marin canshuureed ee sannadihii 2010 iyo 2013 iyo sidoo kale fikirkeedii ka dambeeyay inay dalka Sweden dhalashadiisa qaadato iyo habka ay ku qaadatay oo uu tuhun ka yimid.
Risaaq Diirshe wuxuu ka mid ahaa orod-yahannada dalkan Sweden kuwoodii ugu caan-sanaa, isagoona iminka ka mid ah tababareyaasha dhallin-yarada aan qaan-gaarin ee mustaqbalka ku haminaya iney kaalin ka qaataan tartammada oroddada. Risaaq Diirshe ayaa sidoo kale dhowaantan loo magacaabay darajo markii ugu horreeysay ee shakhsi soomaali ah loo magacaabo, middaasina oo ah ”tababare qaran ee hor-yaallada”. Risaaq diirshe oo ay noo suurtagashay in aannu khadka telefoonka ku wareeysanno ayaa noo sheegay in tuhunka Abeba Aregawi la tuhun-san yahay uu caqabad ku yahay ciyaartooyda reer Sweden, inkasta oo Sweden ay tahay waddan aad ula dagaalama sidii looga hor-tegi lahaa musuq-maasuqa ciyaaraha: